La Korbuzye'i (1964)
La Korbuzye'i (Fireench: /lə kɔr büˈzyeɪ/; Engiliish: Le corbusier; 6 Onkololeessa 1887-27 Hagayya 1965) maqaan dhaloota isaa chaarles-Idwaard Jineret-Giris (Charles-Edouard Jeanneret-Gris) kan ta'e, arkiteektii fi barreessaa Iswiizarlaand keessatti dhalatee bara 1930moota keessa lammii Firaansi ta'eedha. Inni tiyoorii waayee arkiteekcharii ammayyaa'aan beekama. Dizaayniin isaa fooyya'iinsa manneen jireenya ummata magaalaa gurguddoo of keessaa qaba. Kuni sababa yeroo sana namni hedduun hiyyummaa keessa jiraatuufiidha. Dizaayiniin isaa hedduun addunyaa kana irra ijaaramaniiru.
Inni halluu dibuu kan jaallataa turee fi dizaayinii meeshaa manaa dalagutti ogummaa kan qabu ture.
1 Jireenya ganamaa
2 Waraana Addunyaa
3 Waraana Addunyaa - Booda
5 Jireenya gama booda
6 Maqaa isaa
7 Yaada beekamoo
Jireenya ganamaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
La Korbuzye'i magaalaa xiqqoo kaaba Switzerland La Chaux-de-Fonds keessatti guddate. Bara 1907, isaa umurii 19, gara magaalaa Faransaay Paariisitti godaane. Awurooppaa keessa imaluun, yaada haaraa hedduu barateera. Afaan Jarman dubbachu baratuun arkiteektoota beekamoo kan akka Peter Behrens waliin hojjeteera.
Waraana Addunyaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Yeroo waraana addunyaa I, La Korbuzye'i gara Swizerland deebi 'ee barsiisaa ta'e. Yeroo gabaabaattti, hojii arkiteekcharaa mataa isaa dubrii isaa waliin banatee hanga 1940tti waliin hojjatani. Bara 1918 tti hallu dibaa Amédée Ozenfant wal arganii hiriyaa cimaa waliif ta'an. Yaada isaanii walitti fidanii aartii gosa haaraa Purism jedhamu uuman.
Waraana Addunyaa - Booda[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Lola booda, La Korbuzye'i hanga 1922 tti aartii isaa irratti xiyyeefate. kana booda, appartimantii wal gubba ijaaaramuu ta'u fedhii manneeni namootaa guutuf dizaayinii godhuu jalqabe. Hojii manneeni kun rakkoo paaris keessatti namootni walii baay'atani jiraatan furuuf ture. Akka jedhetti jijjiramni kun ni barbachisa, yookin warri gadi galoon finciluu danda'u. Inni diizaayinii magaalaa namni hawwuu (Ville Contemporaine) kan gonkumaa ijaaramee hin beekne uume. Karoora gamoowwan gurguddoo hedduu foyyeessuf godhameedha. Karoora kana mootummaa Faransaayiif dhiyeesse, didaniin. Ta'ullee hubannoo isaan magaalaa keessatti walii baay'atanii jiraachuu guddiseeraaf.
1930moota[gulaali | lakkaddaa gulaali]
La Korbuzye'i manni ummataa hanga maati isaani irratti malee hammam sooressa akka ta'an irratti hundaa'u hin qabu jechuun kapitaalizimii jibbuu eegale.
Jireenya gama booda[gulaali | lakkaddaa gulaali]
La Korbuzye'i bara 1942 irraa eegalee siyaasa keessatti hirmaataa hin turre. Badala sanii, bilookii manneen xixiqqoo biyya Faransaay keessatti ijaara ture.
Maqaa isaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Maqaan, La Korbuzye'i, Firenchi dha. maqaa akkoo isaa, Lecorbésier irraa kan foyyeefameedha. Maqaan isaa Ingiliffaan The crow like one (Loon akka tokkotti) jedhamuun hiikama. Maqaa kana bara 1920 keessa filate.
Yaada beekamoo[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Gamoon geejjibaa waliin, keessumaayyuu konkolaataa, yaada keessa galchuun ijaaramuu qaba jedhe La Korbuzye'i. Inni arkitektii jalqabaati kana yaadachiisuuf, yeroo amma immoo karoora magaalaa mara irratti gaafa gamoo diizaayinii godhan kana yaada keessa galchu.
Manni maashina kessa jiraatani jechuun ariiti arkitekchara kessatti ilaala. Kaayyoon maashinii kanaa hojiiwwan namoota isa keessa jiraatanii saffisuudha. Inni yaada mana jireenyaa kobkobii, kutaawwanii fi slabs qofaan ijaaru beeksisee jira. Wantootni sadeen kun mana jireenyaa gosa kamiyyuu oomishuu ni danda'a, warra jireenya isaani kamiifuu.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Corbusier&oldid=36802" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 23 Caamsaa 2021, sa'aa 21:39 irratti.